Wasiirka Cayaaraha Soomaaliya oo sheegtay in ay qabteen kaarar faalso ah oo lagu geli lahaa Garoonka Banaadir digniina dirtay? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Wasiirka Cayaaraha Soomaaliya oo sheegtay in ay qabteen kaarar faalso ah oo lagu geli lahaa Garoonka Banaadir digniina dirtay?
(15-12-2017) Wasiirka Wasaarada Dhalinyarada iyo cayaaraha dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya Khadiija Maxamed diiriye ayaa sheegtay in ay Ciidanka amaanka Garoonka Banaadir ay qabteen kaarar faalso ah oo ladoonayey in lagu galo Garoonka isla Markaana ay gacanta ku hayaan dadkii watey.
Khadiija Maxamed diiriye oo lahadashay TV ga Universal intii ay socotey Cayaarta Puntland iyo Koofur Galbeed ayaa sidoo kale ka codsatay Taageerayaasha in ay joojiyaan dhagaxaan ay tuurayaan oo waxyeelo gaarsiisey kasoo qayb galayaasha Cayaraha Maamul Goboleedyada iyo Gobolka iyada oo sidoo kale ka codsatay Ciidanka amaanka in ay joojiyaan Xabadaha faraha badan ee ay ridayaan.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayey warar muujinaya cabsi laga qabo dhanka amaanka waxaana labaajiyey kulan shalay dhex mari lahaa Maamulada Galmudug iyo Jubaland kadib qarax dad badan ku dhinteen oo ka dhacay degmada Xamar Ja Jab ee Gobolka Banaadir.
Wasiiradu macadayn Waxa ay ahaayeen dadka ay qabteen ee Samaytey Kararka faalsada ah balse Waxa ay ku gaabsatay in Ciidanka amaanku gacanta ku hayaan dadkii watey Kaararkaas.